China Dodecyl Dimethylamine, CAS No. 112-18-5, orinasa sy mpanamboatra DMA12 | Kerui Chemicals
Anaran'ny varotra: DMA12
Dodecyl dimethylamine (DMA12) no akora fototra amin'ny famokarana sira amoniôma quaternary kationika. Izy io dia azo raisina miaraka amin'ny benzyl chloride mba hamokarana sira amonium quaternary quartnary 1227, izay be mpampiasa amin'ny indostrian'ny mpamono fungis sy ny textile;
Dodecyl dimethylamine (DMA12) dia afaka mihetsika amin'ny akora amonium quaternary toy ny methyl chloride, dimethyl sulfate, diethyl sulfate sy ny sisa hamorona sira amonium quaternary quationnary;
Dodecyl dimethylamine (DMA12) azo raisina ihany koa amin'ny chloroacetate sodium mba hamokarana surfactant amphoteric betaine BS-12;
Dodecyl dimethylamine (DMA12) dia mifampiraharaha amin'ny hidrozenina peroxyde hamokatra amine oksida ho toy ny mpamokatra foam;
Atiny amine fahatelo /%
Ny soatoavina amine am-pianarana mgKOH / g
Amine ambaratonga faharoa /%
Carbon rojo C12 /%
Dodecyl dimethylamine (DMA12) dia feno 160 kg, 800 kg / barila; voatahiry anaty trano amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy misy rivotra, voaro amin'ny hamandoana sy ny masoandro. Ny fe-potoana fitehirizana dia 12 volana.
Dodecyl dimethylamine dia akora simika afovoany syntetika. Aza fady amin'ny masonao sy ny hoditrao mandritra ny fampiasana. Raha misy ny fifandraisana dia miasa azafady amin'ny rano be ara-potoana ary alefaso any amin'ny dokotera mba hotsaboina.